शनिबार, ०२ असोज २०७८, ०६ : २०
शरीरलाई आकर्षक देखाउन अचेल जिम जानेहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । जिम सेन्टर गएर बढीभन्दा बढी तौल उचाल्ने शारीरिक अभ्यास गर्न थालेपछि एकाएक शरीरमा सिक्स प्याक देखापर्न थाल्छ भन्ने भ्रम धेरैमा पाइन्छ ।
चाडपर्व नजिकिँदैछ । यस्तो अवस्थामा उत्साहले नै मन नै फुरुङ्ग हुन्छ । चाडपर्वमा राम्रो खाने र राम्रै लगाउने विशेष मौका हुन्छ । चाडपर्वमा धेरै मानिसहरुसँग भेट हुन्छ । त्यसैले यो समय राम्रो देखिने चाहना सबैमा हुन्छ ।
प्राकृतिक उपायबाट सुन्दर अनुहार
सुख्खा र फुस्रो छालाले धेरैलाई समस्या भइरहेको हुन्छ । छालाको सुख्खापन र फुस्रोलाई हटाउन प्राकृतिक उपायबाट बनेको फेस प्याक प्रयोग गर्न सकिन्छ । बजारमा पाइने फेस प्याकहरुमा केमिकलको मात्रा धेरै हुन्छ । केमिकलले अनुहारमा असर पुर्याउन सक्छ ।
कसरी गर्ने क्लिजिङ
क्लिजिङले मानिसहरुको छालालाई स्वस्थ र सुन्दर बनाउँछ । क्लिजिङ गर्दा कचौरा, पफ (मुहार पुछ्ने सामग्री), क्लिजिङ मिल्क, भिटामिन ई (छालामा लगाउने), कालो खिल निकाल्ने पिन, फेस प्याक, तौलिया आवश्यक पर्छ ।
बिहान काँचो लसुन खाने बानी गर्नुहोस् । यसले शरीरलाई फाइदा गर्छ । बिहान लसुनको दुई या तीन पोटी चपाएर तातोपानीमा कागती हाली पिउनाले शरीरको बोसो कम हुन्छ । यसबाट शरीरको रक्तप्रवाह पनि सुचारु गराउँछ ।
अमला प्रकृतिले दिएको अमूल्य उपहार हो । यसमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन सी पाइन्छ । अमला खानाले आँखाको शक्ति बढ्छ । रोचक त के छ भने साना बालबालिकालाई झाडापखाला लागेका बेला यो खुवाउँदा सोको नियन्त्रणसमेत गर्छ ।
कपाल झर्नु महिलाका लागि मात्र पुरुषका लागि पनि उत्तिकै ठूलो चिन्ताको विषय हो । खासगरी पुरुषहरु पनि चाँडै तालु देखियोस् भन्ने चाहँदैनन् । पुरुषको कपाल झर्न रोक्ने घरेलु उपाय पनि छन् ।
अचेल तीजको मौसम छ । जुनसुकै बेला, जहाँसुकैबाट पनि खानपिन र भेटघाटको निम्तो आउन सक्छ । त्यति मात्र होइन कहिले बच्चा जन्मेको पार्टी, कसैले घर बनाएको पार्टी, विवाह, व्रतबन्ध लगायतका धेरै भेटघाटका अवसरहरु जुरिरहेका हुन सक्छन् ।
नेल आर्ट गर्ने तरिका
अहिले नेल आर्ट विदेशमा मात्र नभएर नेपालमा पनि निकै लोकप्रिय हुन थालेको छ । नङमा विभिन्न रङ लगाएर आफूलाई मनपर्ने बुट्टा, हाँगाका साथै अन्य आकृति कोर्नुलाई नेल आर्ट भनिन्छ । नङलाई विभिन्न रंग–रूप दिएर लामो, चेप्टो वा यु सेप दिएर कृत्रिम नङ जोड्ने चलन फेसनका रूपमा भित्रिसकेको छ ।
कपालमा मेहन्दी कसरी लगाउने ?
एक पटक मेहन्दी लगाउँदैमा केही महिनासम्म ढुक्क भयो भनेर सोच्नु हुँदैन । मेहन्दी लगाएको कपाल केही दिन राम्रो देखिन्छ । तर यसलाई राम्रोसँग हेरचाह गर्ने सकिएन भने केहि दिनपछि कपाल झर्ने समस्या हुन सक्छ ।
ओठको कालोपनको उपचार
ओठको कालोपनले सबैभन्दा बढी महिलालाई नै चिन्तित बनाउने गरेको छ । जसको कालो होठ हुन्छ, उसले सानो मिहिनेत गर्दा पनि ओठलाई गुलाबी बनाउन सक्छ । तर हामी प्राकृतिक उपचार नखोजी विभिन्न किसिमका क्रिम र कस्मेटिक प्रयोग गर्ने गर्छौं ।
कसरी हटाउने डण्डिफोर ?
प्रायः किशोरकिशोरीका लागि डण्डिफोर (पिम्पल) एउटा साझा समस्या बन्ने गरेको छ । किशोर अवस्थामा हार्मोनमा हुने परिवर्तनसँगै अनुहारमा डण्डिफोर आउँछ । कहिलेकाहीँ शरीरमा विशेष गरी पिठ्युँमा पनि डण्डिफोर आउँछ तर कहिलेकाहीँ किशोरकिशोरीबाहेक अन्य उमेर समूहका मानिसलाई पनि डण्डिफोर आउने गर्छ ।
रेड वाइनको फेसप्याक
उमेर बढ्दै गएपछि मानिसको अनुहारमा विभिन्न किसिमका दाग, रेखा, डार्क सर्कल, रिङ्कल, कालोपन लगायतका समस्याहरु आउने गर्छन् । यी सब कुरालाई मेकअपले जति लुकाउन खाजे पनि लुक्दैन । यी सबै बढ्दो उमेरका समस्या हुन् ।
कपालले महिलालाई सुन्दर बनाउँछ । त्यसैले कपालको हेरचाह राम्रोसँग गर्नुपर्छ । कपाल सुन्दर भए पनि हेरविचार राम्रोसँग गरिएन भने कपाल फुस्रन थाल्छ भने भएको सौन्दर्य पनि हराउँछ । राम्रो सेम्पु र नियमित तेलको मालिसले मात्रै कपाल राम्रो बन्दैन ।
आँखा मुनिको कालोपन वा डार्क सर्कल अचेल सबैको समस्या बन्न पुगेको छ । चाहे महिला हुन् या पुरुष तिनको आँखामा कालो घेरा देख्न सकिन्छ । राम्रोसँग निद्रा पूरा नहुनु, बढीभन्दा बढी स्मार्टफोन, कम्प्युटर वा टेलिभिजनमा समय बिताउनु यसका केही प्रारम्भिक कारण हुन सक्छन् ।
अनुहारलाई घामबाट बचाउनुस्
गर्मीयाममा कडा घाम लाग्ने गर्छ । घाममा निस्कँदा छाला डढ्ने समस्या हुन्छ । जाडो मौसममा भन्दा गर्मी मौसममा छालामा धेरै समस्या हुन्छ । गर्मीमा छाला कालो हुने मात्रै होइन, चायाँ–पोतो पर्ने र अनुहारमा कालो धब्बा बस्ने समस्याहरु देखिन्छन् । यस्तो बेला छालामा चिल्लोपन पनि बढी देखिने गर्छ ।
कसरी फलले गर्छ, अनुहारको हेरचाह
आँपलाई फलको राजाको रुपमा लिइन्छ । यसमा भिटामिन ए, सि, इ, के, मिनरल, क्याल्सियम र म्याग्नेसियम हुने गर्छ । यसले एन्टिअक्सिडेन्टको रुपमा काम गर्ने गर्छ । आँपलाई अनुहारमा लगायो भने यसले अनुहारलाई ताजगी, जवान र गोरो बनाउन मद्दत गर्छ ।
घरमा कसरी मेकअप गर्ने
मेकअपले मानिसको सुन्दरतालाई बढाउने काम गर्छ । मेकअप बिनाको अनुहारमा चमक हुँदैन । मेकअपले मान्छेको पूरै बान्कीलाई नै परिवर्तन गरिदिन्छ । चाहे अफिस होस् वा कलेज होस्, हरेक ठाउँमा जादाँ मेकअप गर्नु जरुरी हुन्छ ।